ISAHLUKO 8: TEXT - Geofumed
ISAHLUKO 8: TEXT
Ngokungaqhelekanga, zonke izakhiwo, izakhiwo zobunjineli okanye imidwebo yemimandla kufuneka zongezwe itekisi. Ukuba isicwangciso sezidolophini, umzekelo, amagama ezitrato kufuneka zongezwe. Imizobo yezicatshulwa eziqhelekileyo zineenkcukacha ze-worksho kwaye kuya kuba nabanye ukuba, ubuncinane, banegama lomzobo.
Ku-Autocad sinemibini ehlukeneyo yezinto ezibhaliweyo: iteksi kwimiqolo kunye neetekisi kwiimizila emininzi. Iyokuqala ingaba nayiphi na isandiso, kodwa iya kuhlala isetekisi kumgca omnye. Okwesibini, nangona kunjalo, unokuba ngumhlathi omnye kunye nemida apho isicatshulwa siya kusasazwa khona. Ngako oko, iimpawu zesicatshulwa, ezifana nohlobo lwetale, ubukhulu bayo kunye nezinye iimpawu, zilawulwa "kwiStyles Styles". Masibone zonke ezi mpawu.
Post edlulileyo«Edlulileyo 7.4 Ukungabonakali
Post Next I-8.1 Umbhalo kumgcaOkulandelayo "